Fitaterana an-dranomasina : mahabetsaka ny loza ny andro ratsy sy rivodoza | NewsMada
Fitaterana an-dranomasina : mahabetsaka ny loza ny andro ratsy sy rivodoza
Nanomboka omaly ary maharitra 10 andro, eto an-dRenivohitra, ny atrikasa fanofanana momba ny lalàna mikasika ny fanadihadiana ny loza an-dranomasina. Manome izany fiofanana izany ny OMI(1) miaraka amin’ny APMF(2).
Havaozina hatrany ny lalàna mikasika ny fanadihadiana ny loza an-dranomasina. Manana ny azy manokana i Madagasikara, nefa amin’ny maha mpikambana antsika ao amin’ny OMI, misy ihany koa ny lalàna iraisam-pirenena tsy maintsy arahina. Tafiditra ao anatin’ny fitaterana an-dranomasina avokoa ny 90 % ny raharaham-barotra rehetra maneran-tany. Amin’ny maha Nosy an’i Madagasikara, mitana anjara toerana lehibe ny fitaterana an-dranomasina, ankoatra ny jono sy izay fikarohana rehetra ambanin’ny ranomasina. Noho izany, tsy azo atao ambanin-javatra ny fisorohana ny loza.
10 taona namoizana ain’olona 218
Eto Madagasikara ihany, tao anatin’ny 10 taona, 55 ny loza an-dranomasina niseho namoizana ain’olona 218. Koa havaozina, araka ny lalàna, ny fandalinana ny antony nisehoan’ireny loza ireny hahitana ny tena marina, hisorohana izany araka izay azo atao. Amin’ny ankapobeny, miteraka loza maro ny andro ratsy sy rivodoza, eo koa ny faharatsian’ny sambo na tsy fahafehezan’ny tantsambo ny asany. “Tombontsoan’ny tany mpikambana rehetra ao amin’ny OMI ny fitovian’ny fanaovana fanadihadiana rehetra miainga avy amin’ny lalàna, ka tamin’ny taona 2013 izao ny lalàna nohavaozina farany”, hoy ny solontenan’ny OMI, Babakar Diop.
“Fifehezana izany lalàna vaovao izany ho an’ny teknisianina isan-tsokajiny eto Madagasikara, izay arindra araka ny lalàna eto amintsika ny votoatin’izao atrikasa fanofanana izao”, hoy ny tale jeneraly lefitry ny AMPF, Ahmad Joseph. Eto an-toerana, adidin’ny APMF ny manara-maso ny lafiny teknika izay manao asa an-dranomasina rehetra, anisan’izany ny botry. 1.000 eo ho eo ny sambo eto amintsika, tsy ao anatin’izany ny botry sy ny lakana. “Vitsy ny sambo vaventy, ny tena marina, tsy ampy ny antontanisa mahakasika ny fitaterana an-dranomasina ”, hoy ihany ny tale jeneraly lefitra. Koa mitondra ny fanampiany ny OMI ho fisorohana ny loza an-dranomasina. Ankoatra izany, mbola eo ny lalàna iraisam-pirenena hialana amin’ireo jiolahin-tsambo. Betsaka ny tojon’izy ireny, indrindra ny aty amin’ny fari-dranomasimbe Indianina.
OMI (1) : Organisation maritime internationale
APMF (2) : Agence portuaire maritime et fluviale